नेकपाको आम्दानी मासिक १० करोड, के–के हुन स्रोत ? - Deshko News Deshko News नेकपाको आम्दानी मासिक १० करोड, के–के हुन स्रोत ? - Deshko News
पार्टी सदस्यबाट उठ्ने लेभीबाटै सत्तारुढ दल नेकपाले मासिक १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने देखिएको छ ।
पार्टीका संगठित सदस्यबाट मासिक सय रूपैयाँ र साधारण सदस्यबाट मासिक २० रूपैयाँका दरले लेभी उठाउने गरी पार्टी विधानको नियमावली बनाएपछि नेकपाले लेभीबाटै करोडौं रकम आम्दानी गर्ने भएको हो । अन्नपूर्णमा खबर छ ।
विधानअनुुसार पार्टी सदस्यको वर्गीकरण गरिएको छ र त्यही आधारमा नियमावलीमा सदस्यता, नवीकरण शुुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।
७ लाख संगठित सदस्यले मासिक सय रूपैयाँका दरले लेभी बुुझाउँदा नेकपाले ७ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । साधारण सदस्यले मासिक २० रूपैयाँ लेभी बुुझाउनुु पर्नेछ ।
नेकपाको विधानले सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्य गरी तीन प्रकारका सदस्यको व्यवस्था गरेको छ । मानार्थ सदस्यका लागि भने विधानमा लेभी रकम तोकिएको छैन । स्वेच्छिक सहयोग गरेमा नेकपाले मानार्थ सदस्यबाट पनि लिनेछ ।
१० लाख पार्टीका साधारण सदस्यमध्येबाट मासिक २ करोड आम्दानी हुुने देखिन्छ । त्यस्तै सांसद, मन्त्री तथा राजनीतिक नियुुक्ति पाउनेहरूबाट पनि नेकपाले मासिक रूपमा लेभी उठाउनेछ ।
नेकपासँग अहिले राष्ट्रिय सभा तथा प्रतिनिधिसभातर्फ कुुल २ सय १३ सांसद छन् । सांसद तथा मन्त्रीहरूबाट मासिक १२ हजार रूपैयाँका दरले लेभी उठाइए पनि कुुल २५ लाख ५६ हजार रूपैयाँ मासिक रूपमा उठ्नेछ । यसमा प्रदेश सभाका सांसद तथा मन्त्रीहरूको रकम जोडिएको छैन ।